Isikhungo Somklomelo We-Expo - I-Florida International Trade Expo
Indawo, Isifundazwe, Izwe
Uyemukelwa esikhungweni semiklomelo se-PlayFlorida Expo. Isikhungo Somklomelo senzelwe ukukhuthaza ukuxhumana phakathi kwabahambele umbukiso futhi sinikeze nemiklomelo kulabo abakhombise izinga elikhulu kakhulu lokubamba iqhaza kwi-Expo. Njengombukiso obhalisiwe noma isivakashi esibhalisiwe, usuvele ungene emncintiswaneni, kepha ukubamba iqhaza kwakho kungakhethwa. Ukudlala, mane uqede izinselelo eziningi ohlwini olungezansi. Inselelo ngayinye eqediwe izokutholela amaphuzu. Abadlali abanamaphuzu amaningi ekupheleni kwempumelelo ye-Expo. Inselelo izoqala ngoMashi 16 kuya ku-18. Abaphumelele bazomenyezelwa ngoMashi 18, 2021 ekupheleni kwe-Expo.
Imiklomelo Yabadlali Abaphezulu abathathu (3):
Umklomelo Wokuqala - $ 1 Ikhadi Lesipho le-Amazon likhokhwe kumaDola aseMelika.
Umklomelo Wesibili - $ 2 Amakhadi Esipho e-Amazon akhokhelwe kumaDola aseMelika.
Umklomelo Wesithathu - $ 3 Amakhadi Esipho e-Amazon akhokhelwe kumaDola aseMelika.
Wina amaphuzu ngokuqedela ukusebenzisana okubonakalayo okulandelayo:
Thola amaphuzu angu-50 ngeminithi ngalinye lokuqukethwe kwevidiyo okubukelwe.
Thola amaphuzu angama-40 ngokuchofoza inkinobho ngayinye, amavidiyo, nolunye ulwazi oluhlobene nombukiso.
Hlola amadokodo embukiso kuyo yonke indawo futhi uqhafaze ku-fishbowl ukushiya imininingwane yakho yokuxhumana Thola amaphuzu angama-25 etendeni ngalinye elivakashelwe.
Thola amaphuzu ayi-150 ngewebhu ngayinye ebukhoma oyibuke ngokuphelele.
Thola amaphoyinti angama-25 ngokuchofoza kumalogo, amavidiyo nakukhathalogi ngayinye yabaxhasi.
Silindele ukubamba iqhaza kwakho!